Home / समाचार / आखिर किन चर्चित कमेडियन भारती सिंह कहिले पनि आमा बन्न सक्दैनन् ? यस्तो छ कारण
admin December 25, 2021 समाचार Leaveacomment 101 Views
त्यो शो मा युवा आमाको कहानी देखाइएको छ जहाँ उसले आफ्नो १४ दिनको बच्चा को’रो’ना भा’ई’र’सका कारण गु’मा’उ’नु परेको छ । यो प्रस्तुती देखेपछि भारती आफ्नो पति हर्ष लिंबाचियाका साथमा स्टेजमा आउँछिन् र भा’ई’रसकै कारण आफ्नो परिवार अघि बढाउने योजनाबारे छलफल गर्न समेत गर्न नसक्ने बताउँछिन् ।
यो बेला हर्ष भने आफ्नी पत्नी भारतीलाई थपथपाउँदै हिम्मत बढाईरहेको देख्न सकिन्छ । यस टिभी शो को होस्ट कमेडियन भारती सिंहले बोलेको कुरा अहिले भाईरल भएको हो । उनले यस प्रतियोगिताको एउटा प्रस्तुतीकरण हेरेपछि आँसु झार्दै आफु बच्चा जन्माउने योजनामा रहेको तर यस्तो देखेपछि हिम्मत समेत गर्न सक्दिन भनेकि छिन् ।
Previous कहाँ बाट आए शनि तामाङ ? जस्ले काठमाण्डौमा घटाए डरलाग्दो घटना !
Next पुस ११ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल